Januwari 8, 2019 Denial245
I 192.168.1.254 kuyinto nekheli le-IP okusho ukuthi zizongena kuze uhla othize okuyinto zivela IANA (Internet Owabelwe Izinombolo Authority) nezinhlobo ezahlukene yangasese. Yandise, lapho sithenga umzila omusha noma imodemu anika lomsebenzisi nephasiwedi. Leli gama lomsebenzisi nephasiwedi tando biyela you ukuxhumana olwengeziwe.
Kodwa ngezinye izikhathi zikhona Kwezinye izimo lapho sifika ngaphesheya nge ukhohlwe iphasiwedi ye imodemu ethu noma router. Ngakho yini ongayenza ngaleso sikhathi, Ngicabanga ungase ube nenkinga engaka ngoba awukwazi ukufinyelela umzila wakho. Kodwa asidingi sokukhathazeka, esihlokweni lanamuhla ngiya ukukunika ezinye iziqondiso ezibalulekile namathiphu ozokusiza ukuxazulula zonke lezi uhlobo izinkinga futhi uzokwazi ukuba ushintshe iphasiwedi yakho ngokushesha okukhulu.
192.168.1.254 Ikheli le-IP zingasetshenziswa yinoma modems, imizila, namanye amadivayisi eziningi ezifana ewebhu kanye DVRs. Kuyinto ikheli ezenzakalelayo IP control panel esisogwini zonke imizila Cisco kanye namadivayisi. Abasebenzisi kusheshe ukufinyelela leli control panel ngokufaka 192.168.1.245 Ikheli le-IP kunoma iyiphi isiphequluli sewebhu ye-URL.
Lokhu 192.168.1.254 Ikheli le-IP ikakhulu esetshenziswa imizila sesimanjemanje njenge Thompson ADSL imizila, Linksys ukushintshwa, TP-Link imizila Alcatel ADSL modem, 3com imizila, Westell ADSL modem, 2wire imizila, ADSL izigidigidi imizila, SRW2023 futhi imizila abaningi.
Ezinye brand ukuthi ukusebenzisa 192.168.1.254 zihlanganisa:
Billion Routers / modem
Westell DSL modem (US KUPHELA)
Netopia / Cayman Indlela
Ezinye Linksys Routers / modem
3Com Routers / modem
Okufanele ukwenze uma Ukhohlwe ikheli le-IP yakho Igama lomsebenzisi nephasiwedi?
Abangani bami, Okokuqala nje, udinga ukuvala router. Olandelayo, kufanele cindezela bese ubamba inkinobho reset on iphaneli ezingemuva kodwa ukwenza lokho okudingayo pin noma pin ezicijile, noma uzungeze bese uvule router. Kodwa qinani inkinobho reset bese kufanele sokuqhubeka sibambelele inkinobho cishe 5- 10 imizuzwana ngemuva kokushintsha kumzila wakho. Khona-ke ngemva ungakwazi uyekele inkinobho bese ulinda idivaysi qala kabusha. Manje ungakwazi ukuxhuma PC yakho naku laptop ukuze router yakho ngokusebenzisa ikhebula inethiwekhi noma ngokusebenzisa uxhumano lwe-Wi-Fi.
futhi Amaphasiwedi ohlwini Common Iningi ID yomsebenzisi
Common Iningi-Id sika & amaphasiwedi
noyedwa / noyedwa
admin / noyedwa
Administrator / noyedwa
admin / elingenalutho
Okuzenzakalelayo Amagama kanye Amaphasiwedi
router Model Igama lomsebenzisi / Iphasiwedi
2wire noyedwa / noyedwa (noma) elingenalutho / elingenalutho
Aztech admin / admin (noma) umsebenzisi / umsebenzisi (noma) elingenalutho / elingenalutho
Billion admin / admin (noma) admin / iphasiwedi
Motorola admin / iphasiwedi (noma) elingenalutho / motorola (noma) admin / admin
Netopia admin / 1234 (noma) admin / admin (noma) admin / iphasiwedi (noma) admin / elingenalutho
SparkLAN elingenalutho / elingenalutho
Thomson Administrator / CPE.hgw.12 (noma) Administrator / noyedwa (noma) admin / admin (noma) noyedwa / noyedwa (noma) elingenalutho / admin
Westell admin / iphasiwedi (noma) admin / admin (noma) admin / elingenalutho
Linksys admin / admin (noma) admin / noyedwa
Netgear noyedwa / iphutha
Arris admin / iphasiwedi
Sitecom sitecom / sitecom (noma) elingenalutho / sitecom
Thomson Administrator / noyedwa (noma) admin / admin
Gigabyte elingenalutho / elingenalutho (noma) admin / admin (noma) elingenalutho / admin
Indlela Shintsha router Iphasiwedi?
Uma ucwaninga indlela ngemvume ku-router yakho admin iphaneli. ke sicela ageleze lokhu ngezansi ngemvume router ephelele isinyathelo y isinyathelo inqubo.
Iphasiwedi yomngani router kuba admin negama lomsebenzisi kumele kushiywe kungabhalwe lutho. Ngenxa yezizathu zokuvikeleka injongo, iphasiwedi ezizenzakalelayo router kufanele ushintshwe ukuze abanye iphasiwedi okuqinile.
ISINYATHELO 1: Okokuqala nje, iya ekhasini ukusetha router.
ISINYATHELO 2: Bese uchofoza kuthebhu Administration.
ISINYATHELO 3: Khona-ke kusukela kusigaba Management, udinga ukufaka iphasiwedi entsha emkhakheni router Iphasiwedi futhi Phinda Enter ukuze Qinisekisa.
ISINYATHELO 4: Ngesikhathi zokugcina, udinga ukuba uchofoze ku-Londoloza izilungiselelo inketho. Yilokho kuphela! Lena yindlela elula kabusha futhi ushintshe router Iphasiwedi.
Lokho kwaba konke mayelana 192.168.1.254 Ikheli lasesizindeni se-Okuzenzakalelayo router Igama lomsebenzisi & Iphasiwedi. I Ithemba guys like lokhu okuthunyelwe, kodwa uma ebhekene iyiphi inkinga mayelana lokhu okuthunyelwe, sicela ubeke amazwana kithi sizozama ukuxazulula inkinga yakho ngokushesha ngangokunokwenzeka, siyabonga ngokuvakashela indawo yethu.
192.168.2.1 Igama lomsebenzisi & Iphasiwedi – 192-168-1-1l.com
Thumela Previous:Yini 192.168.0.0 Ikheli le-IP?
Thumela Landelayo:192.168.2.1 Igama lomsebenzisi & Iphasiwedi – 192-168-1-1l.com